Calaamadaha Khibradaha Cilmiga ah Sida Loo Adeegsado U-Diritaan Google Analytics
Igor Gamanenko, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Semt , wuxuu halkan ku siinayaa hage dhamaystiran oo ku saabsan sida loo maareeyo is-dirista Google Analytics.
Shirkadeena, wax badan oo ka mid ah shaqo ganacsi weyn ayaa leh Google Analytics. Sida caadiga ah, marka aan samayno dib u eegista falanqaynta ee macaamiisha, waxaan caadi ahaan ogaan karnaa arrimaha asaasiga ah ee is-u-diridda.
Sidoo kale, waxaanu helnay tayad xiriir ah oo la xidhiidha goor dambe oo la xidhiidha dejinta is-diriddiisa. Sida caadiga ah, waxaan u baahannahay inaan soo galno gelitaanka blogka habka ugu fiican ee lagu xallin karo. Haddii aadan maskaxda ku haynin inaad na soo buuxiso oo ku saabsan haddii uu boostada kaa caawiyay inaad wax ka qabato cabashadaada.
Maxay Tilmaame-gelinta Google Analytics tixraacan tahay?
Is-u-diritaan ee Google Analytics waa meesha aad ku aragtid booskaaga muuqaalka warbixinta gudbinta. Inta badan, waa meesha aad ka maqnayd koodhka ka dib ama aad qabto arin wax ku ool ah oo ka dhigaysa hal marti ah inuu kiciyo kulanno kala duwan marka ay jiraan kaliya hal kaliya.
Kiisaska aan caadiga ahayn, is-diritaanada uma baahna inay bilaabaan daqiiqad ficil ah si ay u keenaan is-diritaan is-dhiibasho.
Fursadda aad ka heshay Google Analytics si ay ula socdaan iskuduwaha iskudubarida adoo adeegsanaya meelo kala duwan iyo subdomains oo dheeraad ah, heer yar oo is-diritaan ah waa caadi.
In kastoo aad aragto in badan oo is-diritaan ah ee qoristaada, waxaa la malaynayaa inay jirto dhibaato.
> Maxay tahay lagugula talin lahaa in aad isku hagaajisid is-diritaan?
Is-u-diritaan ee Google Analytics waxay saameyn kartaa dhaqanka, dabeecadda, iyo isbeddelka macluumaadka. Taasi waa aasaas ahaan qaybta ugu weyn ee macluumaadkaaga! Waa inaan baarnaa.
Is-u-diritaanku wuxuu saameeyaa helitaanka macluumaadka maaddaama ay si xeelad-darro ah u ballaariso kulanno ku-meel-gaar ah, oo loogu talagalay qaybta ugu badan ee loo diro. Xaaladaha aan xitaa ficil-galin aan la bilaabin, isla markaana is-qabsi is-wali ah ayaa dhacaya, dhaqdhaqaaq ka soo jeeda kanaalka sida tooska ah iyo CPC ayaa dhab ahaantii la sheegi karaa iyadoo taraafikada laga soo xigtay.
Laba Darawal Sare ah ee Is-Diritaan ee Google Analytics
Labada nooc ee asaasiga ah ee is-diritaanku wuxuu ka yimid:
Laga soo bilaabo saldhigga aasaasiga ah ee raadinta goob jadwalka ah
Ka maqnaanta xeerka soo socda ee ku yaal meerin
Haddii aad ka maqnayd koontaroolka kumbuyuutarka, kani wuxuu dhameeyaa dhamaadka casharka iyo kalfad kale si uu u bilaabo macaamilka ku soo dhejiyo bogga soo socda ee boggaaga internetka kaas oo ku daraya koodhka dabagalka.
Dib u cusbooneysiiya: Arrimaha dheeraadka ah ee ka soo baxa iskood u gudbinta
Ku-xigeenka si aad u sameyso tiro badan oo ah dhibaatooyinkaaga is-xakameynta, waxaan sidoo kale sidoo kale muujinnay laba sababood oo kala duwan oo loogu talagalay is-dirista:
Isticmaalka xumada ee calaamadaha UTM ee ku xirnaanta gudaha
Xakamaynta xogta madaxa
Haddii aad tahay qof calaamadeynaya isku xidhka xiriirka ee leh UTM factor, si naxariis leh u jooji. Taas, nala xiriir annaga oo naga caawiya isticmaalka qiyaasaha hababka iyo hababka si aad u raadiso dagaalkaada gudaha. Waa wax aad u fiican oo aan ku dhicin meesha dhaqdhaqaaqa marka hore ka yimid.
Fursada aad ku aragtay wixii aad ka welwelsan tahay, oo aad tixgelisid inaad xakamayso xogta madaxu waxay noqon kartaa walaac, nala xiriir annaga oo xog badan.
Iskudhinta Is-Diritaan ee Warbixinta Soodhaweynta
Inay fahmaan waxa keenaya is-diristaada waa inay suurtagal noqdaan saddex marxaladood. Marxaladda sadexaad, waxaanu kugusoo siinnay xayasiin si aad u soo bandhigto barnaamiikhi Google Analytics oo aad u baahan doonto si loo baaro. Saddexda marxaladood waa sida soo socota:
Booqo Warbixinta Soodhaweynta Source .
Ku daba-geli farsamooyinka kaalmaynta "Referrer Full"
Hirgelinta Qeybta Horumarka Sare